मोहनको निर्णायक गोलले झरना सेमफिाइनलमा – Khel Dainik
मोहनको निर्णायक गोलले झरना सेमफिाइनलमा
बुटवल (खेलदैनिक) । उपाधिको बलियो प्रत्याशी मानिएको झरना स्पोर्टस क्लब जारी प्रथम स्व. प्रचण्ड थैव स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बुटवल–७ दिपनगर स्थित सिद्धेश्वरी मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा झरनाले फर्साटिकर युवा क्लब विरुद्ध १–० को झिनो अन्तरको जित निकाल्यो । ३५–३५ मिनटको खेलाइएको खेल अन्तरगत पहिलो हाफ दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए ।
यद्यपि दोस्रो हाफ शुरु भएको चार मिनट लगतै ३९औं मिनटमा झरनाका लागि मोहन थापाले एक मात्र निर्णायक गोल गरे । त्यसपश्चातको खेलमा दुवै पक्षबाट गोलका केही प्रयासहरु भए तापनि गोल हुन भने सकेन ।
खेलको म्यान अफ द म्याच झरना कै निर्णायक गोलकर्ता मोहन थापा घोषित भए । थापालाई क्लब कै आयोजक सौभाग्य युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजु मल्ल गाहाले पुस्कृत गरे ।
यो जितसँगै सेमिफाइनलमा पुगेको झरनाले पौष २ गतेका दिन शिवनगर युवा क्लबसँग खेल्ने आयोजक सौभाग्य युवा क्लबका सल्लाहकार राजेन्द्र रिजाल (राजु) ले बताए । त्यस्तै प्रतियोगिता अन्तरगत पौष १ गते बुधबारको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेल जनज्योति क्लब र सिद्धार्थ युवा क्लबबीच हुने सल्लाहकार रिजालले जानकारी दिए ।
सौभाग्य युवा क्लब, बुटवल–७ दिपनगरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद ५५,५५५ रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेताले २५,५५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष दिपक गुरुङले बताए । त्यस्तै विधागततर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरुलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिउको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
रुपन्देही, पाल्पा र नवलपरासीका गरी कुल २० टोलीहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने आउँदो पौष ५ गतेका दिन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
← आठौं फर्साटिकर कप पौषमा हुने तय पथरी प्रिमियर लिगमा सिरिजंगालाई सफलता →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर ३०, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर ३०, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर ३०, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर ३०, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर ३०, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर ३०, २०७७